ကျော်ခ| November 2, 2012 | Hits:1
| | မြန်မာနိုင်ငံ တ၀န်း အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှာရှိတဲ့ စာသင်ကျောင်း အများစုမှာ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းသွားတက်တဲ့ အခါ ခြေကျင်၊ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား တို့နဲ့ သွားလာကြတာ များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပဲခူးတိုင်း ကဝမြို့နယ်ထဲက ကျေးရွာတချို့မှာတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါ…။
မြန်မာ နိုင်ငံမှာက ပညာရေးရဲ့ တန်ဖိုးကို သိပ်အလေး ထားတတ် ကြပါတယ်မသန်စွမ်းများ တန်းတူ ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိရေး ဆွေးနွေးလူတိုင်းအကျုံးဝင် ပညာရေးစနစ်နှင့် မသန်စွမ်းများ တန်းတူပညာသင်ခွင့် ဆွေးနွေးမည်အမျိုးသမီးများအပေါ် ကျောင်းများက ခွဲခြားကန့်သတ်နေမှုများ ရပ်သင့်ပြီကန့်သတ် ချုပ်ချယ်မှုတွေကြောင့် အဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ပညာရေး ဥပဒေမူကြမ်း
Aumg Kyaw Nyunt November 9, 2012 - 10:47 pm Such miserable flooding stories are not only in the Kawa villages but also around the whole lower Myanmar areas specifically Yangon, Bago, Ayeyarwady and Tanintharyi Regions and also Kayin and Mon States. While our country gave priority on irrigation projects constructing numbers of Dams, Reservoirs and Weirs all over the country, they forgot to carryout also important Drainage projects that will save millions of acres of paddy land and rural residential areas and infrastructures. In fact, they did some drainage works but with very marginal budget compared to the irrigation projects. Reality is they need less money inadrainage project compared to the irrigation project to secure same acre of paddy land. Now it is the time for the Government to consider to provide more financial input to the Drainage projects also with sympathy to the lower Myanmar people. Moreover, present name of the responsible organization should be appropriately “The Irrigation and Drainage Department” not only ” The irrigation Department”.